Kordhi amniga WordPress > Vielhuber David
Kordhi amniga WordPress09
Nabadgelyada nidaamka maaraynta waxyaabaha ugu caansan ee WordPress ayaa si weyn kor loogu qaadi karaa iyadoo la rogo laba boolal yaryar. Kaliya waxay qaadataa 5 daqiiqo iyo laba xariiq oo koodh ah. In kasta oo dhibaatada sidoo kale lagu xallin karo tiro badan oo fiilooyin ah, haddana waxaan si ula kac ah ugu xaddidayaa naftayda xalalka aan fiilooyinka lahayn.
Dhinaca mid, sumadda meta-ka ayaa soo muuqata
nooca ugu dambeeya waxaana si fudud loo aqrin karaa iyadoo la isticmaalayo xoqan. Haddii god ammaan ah oo muhiim ah u soo baxay nooc gaar ah oo WordPress ah, way fududahay in lala socdo kumanaan degel websaydh ah oo qaabkan si sax ah u socda. Sidaa darteed waa inaad ka saartaa macluumaadka tuubada soo socota:
Dhibaatada labaad ayaa ah hadal haynta shaashadda.Haddii aad rabto inaad gasho, waxaa si dadban loo siinayaa macluumaadka ku saabsan in magaca adeegsigu jiro iyo in kale. Fariimaha khaldan waxaa si fudud loogu isticmaali karaa barnaamijyada ku habboon si loo kordhiyo suurtagalnimada waxyeello ku timaadda weerar xoog leh. Sidaa darteed waa inaad sidoo kale wax ka qabataa halkan oo aad gashaa jillaab soo socda:
Tallaabooyinka la sheegay waxay kordhinayaan amniga boggaaga sidoo kalena way fududahay in la hirgeliyo. WordPress waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid amaan ah qaabkiisa caadiga ah, laakiin isticmaalkiisa baahsan iyo caannimadiisa ayaa macnaheedu yahay in si isdaba joog ah ay u bartilmaameedsadeen kooxaha wax jabsada.